Maxaa ka soo kordhay mustaqbalka De Jong ee kooxda Barcelona, xilli xiddigan la la xiriirinayey Man United? – Gool FM
(Barcelona) 23 Maajo 2022. Wargeysyada Spian ayaa shaaca ka qaaday maanta oo Isniin ah go’aanka xiddiga khadka dhexe reer Holland ee Frenkie de Jong ee ku aadan fikradda ah inuu ka tago Barcelona suuqa kala iibsiga xagaaga soo socda.
Warbixino dhowr ah ayaa la xiriiriyay De Jong suurtagalnimada ah inuu ka tago Barcelona si uu ugala shaqeeyo tababarihiisii ​​hore ee Eric Tin Hag, mashruuca cusub ee Manchester United, iyadoo kooxda reer Catalonia ay u janjeerto inay iibiso qandaraaska ciyaaryahanka si ay u wanaajiso xaalada dhaqaale kooxda ee xilliyada soo socota.
ESPN ayaa soo wariyay in De Jong uusan dooneynin inuu ka tago Barcelona, ​​​​wuxuuna ku faraxsan yahay kooxda reer Catalan, iyo in muhiimadiisa xilligan ay tahay inuu sii joogo Camp Nou oo uu sii mid ahaado guutada Xavi Hernandez ee mashruuciisa garoonka Camp Nou.
Rabitaanka De Jong ee ah inuu sii joogo Barcelona ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay Barcelona ku dhowdahay inay xal u hesho xaaladda dhaqaale, sida lagu sheegay xog uu daabacay wargeyska El Confidencial ee ka soo baxa Spain saacadihii la soo dhaafay.
Wargeyska ayaa tilmaamay in madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta uu dhamaystirayo heshiiska kooxda ee sanduuqa maalgashiga “CVC” iyo Goldman Sachs, taas oo macnaheedu yahay in dib loogu soo nooleeyo khasnadda kooxda aduun lacageed dhan 900 million euros.